IMyKronoz ZeTie ngumxube phakathi kwewatchwatch kunye newotshi yeanalog | Iindaba zeGajethi
IMyKronoz ZeTime ngumxube phakathi kwewatchwatch kunye newotshi yeanalog
UMiguel Hernandez | | Izixhobo ezinokunxitywa, elektroniki
Iiwotshi ezi-Smart ziya kuba nolutsha lwazo lwesibini kulo nyaka ka-2017, iinkampani ezininzi, zombini ezobuchwephesha kunye neewotshi zakudala, zithatha ithuba lokumilisela iimodeli ezintsha ngenjongo yokufaka i-Android Wear 2.0, inkqubo enamandla kakhulu kwiindawo ezininzi. Le wotshi iza kuphula onke amacebo ethu, ayisiyi-smartwatch kuphela enescreen sokuchukumisa, kwaye ayisiyowotshi ye-analog, enyanisweni, zombini. Makhe sijonge le wotshi ikhethekileyo enokutsala ingqalelo yezona zinto zicocekileyo, kwangaxeshanye inokuqaqambisa abathandi betekhnoloji, ngokulinganayo.
Icing ibekwa ngumngxunya kanye embindini wesikrini, kulapho iinaliti ziya kubakho khona. Nangona kunjalo, enye into enomtsalane ngokuchanekileyo kukuba iinaliti ziya kuhlala kwiintsuku ezingama-30 zihamba. Ewe kuya kufuneka silibale malunga nezixhobo ezikrelekrele zefowuni. Ndinomdla wokubona ukuba bazisebenzise njani iinaliti zakudala ngaphakathi kwesikrini esijikeleze ngokukodwa, kunye noyilo lwayo oluhle.
Le wotshi iyahambelana Nasiphi na isixhobo se-Android ngaphambi kwe-4.3 Jelly Bean, kunye nayo nayiphi na i-iPhone ngaphezulu kwe-iOS 8 (ifakiwe). Kungenzeka njani ukuba ngenye indlela, olona hlobo lweBluetooth olunamandla, i-4.1 BLE, yeyona ibandakanyiweyo phantsi kwale chassis ikhethekileyo.
Le wotshi, nangona kunjalo, ayikafumaneki kwimarike eqhelekileyo. Ngapha koko buxoki iyasebenza kwiphulo lokubuyisa imali, nangona inikwe indlela ebetha ngayo, iya kudlula kude nasiphi na isicelo. Ngale ndlela, iwotshi ehlanganisiweyo inokuba yinxalenye yesandla sakho. Elinye inqaku elikhethekileyo kukuba imitya iyinto yonke, oko kukuthi, unokubeka nayiphi na umtya kuyo njengakwiwotshi yesiko. Ewe, ayinazakhono zobugcisa zigqithisileyo, njengoko kunokulindelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » IMyKronoz ZeTime ngumxube phakathi kwewatchwatch kunye newotshi yeanalog
I-Qualcomm inetyala kwi-Samsung engathengisi i-Exynos yayo kwiqela lesithathu
UDell UltraSharp sisuphavayiza ye-8K eshiya kungekho mntu ungakhathaliyo